စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 07/08/2020)
မြင့်မားသော ratings ရရှိအပြင်၌, ဆွစ်ဇာလန်ရထားများကိုလည်းငွေရေးကြေးရေးအတွက်တန်ဖိုးထားသည်. အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းညွှန်းကိန်းအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များမှာ;
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့အများကြီးလှပသောခရီးစဉ်သည်၎င်း၏အရွယ်အစားသေးငယ်တဲ့ကြားမှရှိပါတယ်. အဲလ်ပ်တောင်များနှင့်ရေခဲမြစ်များသည်အဓိကဆွဲဆောင်မှုဖြစ်သော်လည်းခရီးသွားများလည်းရှေးဟောင်းကိုနှစ်သက်ကြသည် ရဲတိုက်, ရှင်းလင်းသော စိမ်းရေကန်များ, နှင့် bucolic ကျေးလက်. သငျသညျခံစားနိုငျတစ်နှစ်မဆိုအချိန် တောင်တက်, ရေခဲပြင်စကိတ်စီးခြင်း, ပွဲတော်များနှင့် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကျင်းပတဲ့ပွဲတွေ. ထို့အပြင်, ဒါကြောင့်ခရီးသွားများအတွက်တစ်ပိုလုံခြုံရာအရပျစေရာဆွစ်ဇာလန်အတွက်အလွန်နိမ့်ရာဇဝတ်မှုနှုန်းကိုလည်းမရှိ. ဆွစ်ဇာလန်ရှိမဖြစ်မနေတွေ့ရမည့်နေရာများမှာ Matterhorn ပါဝင်သည်, ကမ္ဘာကြီးကိုအများဆုံးရိုက်ကူးတောင်တော်သို့ဖြစ်သော Zermatt. တူညီစွာ, Chateau က de Chillon, Montreux ခရီးသွားဧည့်များအတွက်-မဖြစ်မနေကြည့်ရှုနေသည်. ပါဝင်ပါသည်သောဤရှေးဟောင်းရေခံတပ် 25 အဆောက်အဦးများနှင့်သုံးတန်တိုင်းကမ္ဘာပေါ်မှာအများဆုံးသွားရောက်လည်ပတ်သမိုင်းဝင်အဆောက်အဦးများထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်.
သင်သည်သင်၏ site ပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/swiss-trains-ranked-best-europe/ - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)